Ibu Ọrụ Oha - Zhejiang Lanhine Medical Products Ltd.
Usoro nkpuchi ihu
Nkpuchi ihu ihu
Nkpuchi ihu nkpuchi
Usoro Ọta ihu
Usoro COVID-19 ndị ọzọ
Usoro Nlekọta Homelọ
Nlekọta Onwe Onye nke Onwe
Nlekọta Ndị Ọrụ
Ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ etinyela ọrụ nke ndị ọrụ ọrụ n'ọnọdụ dị mkpa, na-agbaso ndị mmadụ, na-ekwusi ike na nlekọta mmadụ.
O nweela ezinụlọ buru ibu nke ndị ọrụ ndị na-emekọ ihe ọnụ, ndị isi, na-elekọta ma na-enyere ibe ha aka.
● Nye ezigbo ụlọ ọrụ na ezigbo ụgwọ ọnwa na ntọala ọdịmma;
Lezienụ anya na mmụba ọkachamara nke ndị ọrụ ma mepụta gburugburu uto dị mma;
Nye otutu nkwado maka lọjistik maka ndị ọrụ: nchekwa ụlọ, ngwa ọrụ ndụ, ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka na omenaala na egwuregwu, wdg;
.Mepụta otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ iji nyere ndị ọrụ aka na nsogbu nwere nnukwu nsogbu ma ọ bụ ọghọm akụ na ụba.
Mmekọrịta Ndị Ahịa
Lanhe Medical na-agbaso "echiche" ndị ahịa "na-ejikọ ụkpụrụ nke iguzosi ike n'ezi ihe, agụụ, na ibu ọrụ n'ime ndị ahịa ya
N'ime mmekọrịta ndị ahịa, chee echiche banyere ihe ndị ahịa na-eche, na-echegbu onwe gị maka ihe ndị ahịa na-eche, ma na-echegbu onwe gị banyere ihe ndị ahịa na-echegbu onwe ha, ma gbalịsie ike bụrụ ndị na-ebubata ntụkwasị obi!
Ahia ● Ntughari ahia: Na-amu ihe ndi ahia choro ma na-etolite ngwa ahia di elu ma na adi nma iji me ndi ahia ahia;
A-value Innovative uru: Iji usoro, usoro nhazi usoro iji nye ndị ahịa ngwaahịa ọhụrụ ma bulie asọmpi.
Inyere ndi mmadu aka na inyeghachi ndi mmadu ihe omuma bu oru na oru nke Bluehe Medical ruo ogologo oge. Rụ ọrụ ebere bụ
Onyinye nke otu ụlọ ọrụ na ọha mmadụ bụkwa ihe na-akpali akpali nke ụlọ ọrụ ahụ iji nweta ihe ịga nke ọma na-adịgide adịgide. Anyị na-eme ihe omume iji wulie ọha mmadụ ka mma.
Ga-agba mbọ na-enweghị atụ. Nlekọta Ahụike Lanhe nwere obi ụtọ ma nwee nchegbu gbasara ọrụ mmekọrịta ọha na eze, na-ekwusi ike na "mmepe ụlọ ọrụ dabere na ọha mmadụ, yana ụlọ ọrụ
Echiche nke "nweta na ịlaghachi na ọha mmadụ" pụtara na ebe ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịzụlite, ọ naghị echefu ibu ọrụ mmekọrịta ya. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ dịla
Omume mba ụwa na-ezigara ndị nọ ná mkpa ọmịiko ma na-enye nkwado maka iwu obodo.
Nchekwa ike na mbelata oriri: ingza oku nke mba ahụ, mepụta ike nchekwa na mbupụ ọkụ, kpochapụ ikike mmepụta oge ochie na usoro mmetọ na gburugburu ebe obibi, ma kwalite mmepụta dị ọcha ma wuo ụlọ ọrụ na-eme ka gburugburu ebe obibi.
Officelọ ọrụ Green: Lanhe Medical na-akwado ọfịs ọgbara ọhụrụ ma mepụta usoro nke sọftụwia ọfịs iji dochie nkwukọrịta dabere na akwụkwọ ma kwalite obere Ihe dịka ọfịs na-ewe ike, ụlọ ọrụ na-enweghị akwụkwọ, yana iji usoro eji eme ihe, na-akwalite nchekwa nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, chekwaa ihe, ma chebe gburugburu ebe obibi. Nlekọta di omimi: Mee ka nchedo gburugburu ebe obibi sie ike, nyocha onwe onye na nyocha nke ime, ma nweta gburugburu ebe obibi, uru na uru azụmahịa Imeri ọnọdụ.
Promotion Nkwalite nchedo gburugburu ebe obibi: Mepụta ụdị ọzụzụ ọzụzụ gburugburu ebe obibi dị iche iche, mee ka mkpa ọ dị maka nchekwa gburugburu ebe obibi pụta, wee melite ụlọ ọrụ na-ahụ maka gburugburu ebe obibi nke ndị ọrụ. Ihe omuma ahia na nka.
1989 Cidong Road, Cidongbinhai District, 315300 Cixi City, Zhejiang Province, Republic of China.